I-Volto - Inqaba yakudala emangalisayo enepuli enamanzi ashushu - I-Airbnb
I-Volto - Inqaba yakudala emangalisayo enepuli enamanzi ashushu
Enye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziyi-8 zenqaba, ukufikelela kumgangatho wokuqala ngezitepsi ezinyukayo nezixineneyo. Amagumbi okulala ayi-2 (amabini + amabini), igumbi lokuhlambela eliyi-1 (ishawa + ibhafu), igumbi lokuhlala elinesofa elala abantu ababini, indawo yokubasa umlilo nekona yekhitshi. Abantu abayi-4, ilineni yebhedi kunye neetawuli ziqukiwe kwixabiso. Abantu abongezelelekileyo babhataliswa i-Yuro 35 ngosuku. I-WiFi yasimahla, iindawo zokudlala zangaphakathi nezangaphandle kunye negumbi lokubraya. Ukufikelela simahla kwipuli esetyenziswa nangabanye abantu, enamanzi ashushu negqunyiweyo kunye neJacuzzi + iibhafu ezinamanzi ashushu kunye ne-minipool, zivuliwe unyaka wonke!
4.83 · Izimvo eziyi-270
Izimvo eziyi-1 165